RASMI: Xiddigii & Da’yarkii ugu fiicnaa Tartanka UEFA Champions League 2021-2022 oo la shaaciyey… (Benzema oo…) – Gool FM
RASMI: Xiddigii & Da’yarkii ugu fiicnaa Tartanka UEFA Champions League 2021-2022 oo la shaaciyey… (Benzema oo…)
Haaruun May 31, 2022
(Yurub) 31 Maajo 2022. Waxaa si rasmi ah loo shaaciyey ciyaaryahankii iyo da’yarkii ugu fiicnaa tartanka UEFA Champions League xilli ciyaareedkiisa 2021-2022.
Kooxda kubadda cagta Real Madrid ee dalka Spain ayaa ku guuleysatay Koobka Horyaallada Yurub kaddib markii ay ka adkaadeen Sabtidii naadiga reer England ee Liverpool.
Final-kii Champions League ee sanadkan lagu ciyaaray Magaalada Paris ayaa goolka ay guusha ku heleen waxa ay Los Blancos ka heshay xiddigeeda reer Brazil ee Vinícius Júnior.
Haddaba Karim Benzema ayaa loo magacaabay xidiggii ugu fiicnaa tartankii Horyaallada Yurub ee Champions League xilli ciyaareedkan 2021-2022, kaddib markii uu 15 gool ka dhaliyey, isla markaana hal caawin ka sameeyey 12 kulan oo uu ciyaaray tartanka.
Weeraryahanka Faransiiska ah ayaa kooxda Real Madrid kula guuleystay shan Champions League tan iyo markii uu sanadkii 2009 kaga soo biiray kooxda Lyon, balse Los Blancos ayaa ah kooxda tirada ugu badan haysata tartanka koobka horyaallada Yurub iyagoo ku guuleystay 14 jeer.
Dhinaca kale Vinícius Júnior oo isna ka tirsan kooxda Real Madrid ayaa loo doortay da’yarkii ugu fiicnaa tartanka UEFA Champions League xilli ciyaareedkan 2021-2022.
21-sano jirkaan reer Brazil ayaa Champions League ka sameeyey kal ciyaareedkan lix caawin, isagoo ka dhaliyey afar gool, waxaana goolashaas ka mid ahaa goolkii koobka lagu qaaday ee uu ka dhaliyey Liverpool Final-kii tartanka horyaallada Yurub.
Waxa uu ahaa sanadkii kooxda Real Madrid, waxaana hadda la fahamsan yahay in Karim Benzema loo gacan gelin doono abaal-marinta qiimaha leh ee Ballon D’or.
Kooxda Juventus oo ku dhow inay la wareegto Paul Pogba & Angel di Maria... (Mid ka mid ah saxiixyadaan ayaana laga yaabaa in lagu dhawaaqo Isbuucaan)
Kooxaha Arsenal iyo Chelsea oo ku loolamaya saxiixa xiddig weyn ee ka ciyaara Premier League